Fumanisa izimvo zokuphinda usebenzise iingqayi zeglasi ezinkulu | IBezzia
Susana Garcia | 01/05/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 29/04/2021 21:00 | Ikhaya
El yokurisayikilisha esebenzayo kunye noyilo yenye yezona zinto zibalaseleyo esinokuyenza ukwenza ubomi bethu buzinze kancinci imihla ngemihla. Yonke imihla sisebenzisa iingqayi zeglasi kukutya okuninzi okufana nejem okanye iimbotyi. Ezi nkonkxa zingaphoswa kwisitya sokurisayikilisha kodwa singasebenzisa ezinye ukwenza izinto ezintsha, eyenye indlela yokurisayikilisha enika ubomi obude kwiglasi.
Kungenxa yoko le nto namhlanje siza kuya jonga indlela yokusebenzisa kwakhona iingqayi zeglasi, isiseko esilula kakhulu esinaso sonke ekhaya kwaye sinokwenza izinto ezinkulu ngazo. Fumana kwaye uqokelele zonke ezo zitya zeglasi uzilahlileyo kude kube ngoku kwaye ulungele ukuzisebenzisa kwakhona kwizinto ezahlukeneyo. Uya kubona ukuba kukho umhlaba wonke onokufumanisa.
1 Iingqayi zeglasi zokugcina iziqholo
2 Tyala iziqholo kwiimbiza zakho
3 Sebenzisa iingqayi njengeetupper
4 Yenza izibane ezimangalisayo
5 Iingqayi zeglasi zokugcina izinto
Iingqayi zeglasi zokugcina iziqholo
Umbono olungileyo ukuba ufuna ukugcina izinto ezininzi kukuqokelela iingqayi zeglasi ezinobungakanani obufanayo okanye uyilo olufanayo. Ngale ndlela kuya kuba lula kuyo yonke into ukudibanisa kwaye kubonakale kulungile. Nawe unokwenjenjalo thenga izigqubuthelo ezifanayo okanye uzipeyinte ngombala ofanayo. Kulula ukufumana iilebheli zezinto ezahlukeneyo ezinje ngekofu, iziqholo, okanye iicookies, kodwa kukwakho neelebhile ezinjengebhodi onokuzibhala kamva kwaye ziyaguquguquka ngakumbi. Yindlela elungileyo yokusebenzisa kwakhona iitoti kwaye ungathengi abanye ukugcina ezi ntlobo zezinto. Indlela yokutya encinci.
Tyala iziqholo kwiimbiza zakho
Izinongo ezincinci zingatyalwa kwiindawo ezincinci. Kuyinyani ukuba singazisebenzisa ezi zikhephe ukutyala ezinye zithanda iparsley encinci okanye i-oregano umzekelo. Ukutyala olu hlobo lwento kusinceda ukuba singathengi kakhulu kwaye sikwaqonda ukuba kunokuba mnandi kangakanani ukwenza izinto zakho ezinje ngeziqholo ekulula ukuzilungisa nokuzikhathalela. Ngale ndlela uya kuba neparsley entsha ngokupheleleyo ekhitshini lakho ngaphandle kokutyala imali kakhulu.
Sebenzisa iingqayi njengeetupper
Enye indlela yokubuyela kuyo ukusebenzisa ezi iingqayi zeglasi ezincinane kukuthwala amashwamshwam kwasekuseni okanye emva kwemini. Kuyinyani ukuba iingqayi zinokuba nobunzima obungaphezulu kodwa iglasi isempilweni kakhulu ukuba siza kukufudumeza ukutya kwimicrowave okanye siphinde sisebenzise. Kwezijagi unokuphatha iisaladi ezincinci okanye amashwamshwam ukuba utye yonke imihla emsebenzini okanye apho ufunda khona. Ngale ndlela unokuphinda uzisebenzise kwakhona.
Yenza izibane ezimangalisayo
Iingqayi zeglasi ziphinda zibe sisiqwenga esinokubakho sebenzisa umhombiso wethu wasekhaya. Kule meko sinokusebenzisa iingqayi zeglasi njengenxalenye yesibane sesitayile seshishini. Zininzi izibane ezineebhalbhu emoyeni kodwa singasebenzisa iitoti ukubonisa ukukhanya ngakumbi kwaye sikunike ukubamba okwahlukileyo, ngakumbi kwezamashishini nakwimvelaphi. Olu lutshintsho olunzima ukulwenza kodwa ngokuqinisekileyo lunokuba sisibane esimangalisayo.
Iingqayi zeglasi zokugcina izinto
Ezi nkonkxa zilungile ekucwangciseni izinto ekhaya. Ukongeza, zilungile ekhitshini, ke baninzi abantu abazisebenzisayo ekhitshini ukulungiselela izinto ezinje ngokusika. Unga yongeza ithegi kuyo yonke into ekwindawo yakho kwaye usebenzise imbiza kwindawo nganye yokuseta. Yindlela elula yokuzigcina zisondele xa sizifuna. Ke sinokuba nezona zisetyenziswa kufutshane kwizikhephe. Ngumbono olula kakhulu kodwa kunokuba kuhle ukuba sikhethe iingqayi zeglasi ezintle ezinokuhonjiswa ngamalaphu okanye ngeentambo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Izimvo zokuphinda usebenzise iingqayi zeglasi